Malunga Nathi SOTHIS (SUZHOU) ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD
I-Air Particle Counter
IKhabhinethi yoKhuseleko lwendalo
IiYunithi zesihluzi sabalandeli
Isihluzi soMvavanyi weMedia
ibhokisi yokupasa eguqukayo
ibhokisi yokupasa emileyo
ibhokisi yokudlula ishawa yomoya
Indawo yokulinganisa ubunzima
I-Ceiling Laminar Airflow
Iinqwelo zoThutho eziQhutywayo zeLaminar
Ibhokisi yesihluzo se-HEPA
Injongo yethu kunye neMbali
Isekwe ngo-1997, iSothis (Suzhou) Environment Technology Co;Ltd inikeza umgca opheleleyo wezixhobo zokucoca igumbi, ukubonisana kunye nezisombululo kuluhlu olubanzi lwamashishini kunye neemveliso ze-application.These zahlulwe zibe ngamacandelo amathathu kuquka izixhobo zokuvavanya, izixhobo kunye nomvavanyi wokucoca.Izinto eziphambili yi-particle counter / sampler yomoya / ibhentshi ecocekileyo / ibhokisi yokudlula / ishawa yomoya / igumbi lokulinganisa /.
Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava kulawulo longcoliseko, sizakhele awethu amasebe e-R&D ngemigca yemveliso esi-8.I-OEM kunye ne-ODM inokufumaneka.Ngokubhekiselele kuphuhliso oluzinzileyo, Siseke intsebenziswano yexesha elide kunye neeyunivesithi ezaziwayo-kakuhle zasekhaya, amaziko ophando kunye nemibutho yoshishino kunye notshintshiselwano lwezemfundo oluqhutywa rhoqo.Okwangoku, iSothis igcina utshintshiselwano namaziko ophando angaphandle avela kwihlabathi liphela.
I-Sothis ikhokelwa phantsi kweqela elincinci elite kunye nempendulo ekhawulezayo kunye nolwazi lobuchwephesha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu.Izinto zethu zithunyelwa eVietnam, ePakistan naseIndiya njalo njalo.Ngoku, Samkela ngokunyanisekileyo abahlobo abaninzi ukuba baqhagamshelane nathi.
Isithembiso sethu singunaphakade
Okujoliswe kubathengi: Yakha intsebenziswano kunye nabathengi kunye nababoneleli ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ukugqithisa ukulindela kwabathengi, kwaye uhlala uvelisa iimveliso kunye neenkonzo ngeenzuzo ezikhuphisanayo.
Ukuqhelaniswa nomgangatho: umgangatho weemveliso kunye neenkonzo sisiseko sokusinda kwenkampani, kufuneka sihlale sibeka umgangatho kuqala.
Iziphumo ezijolise kwiziphumo: sigxininisa kwiziphumo, sibeka iinjongo ezicacileyo kwaye silungelelanisa kunye nezicwangciso ezicwangcisiweyo ezicacileyo zokufikelela kwiziphumo zokugqibela ngokuphunyezwa okungenasiphako.
Ejolise kubasebenzi: inkqubela yabasebenzi ngumthombo wophuhliso lwenkampani, enoxanduva lokukhula kwabasebenzi, kunye nokuhamba phambili nabasebenzi.
Okujoliswe kwiziko: Siyayihlonipha inkqubo yenkampani kwaye simisela umgangatho wokwenziwa komsebenzi kuwo onke amanqanaba
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwiilabhoratri, amagumbi acocekileyo, iifektri zamayeza, izibhedlele, izikolo, izixhobo zombane, iisemiconductors, ukutya neziselo njl.njl.
Umzi-mveliso wethu kunye negumbi lokubonisa
Sothis (Suzhou) Environment Technology Co.Ltd ineminyaka engaphezu kwama-30 amava yobungcali kwizixhobo zegumbi ezicocekileyo, Ngabasebenzi 200, amagcisa aphezulu ngaphezu 20, 10000 square metres workshop, ISO isiqinisekiso, iyure enye ukufikelela kwizibuko Shanghai, le yindlela esigcina ngayo. umgangatho ophezulu kunye nezibonelelo ezikhuphisanayo kubathengi abaxatyisiweyo behlabathi.
I-Laminar flow hood, ishawari yomoya, ibhokisi yokupasa, ikhabhathi yokhuseleko lwebhayoloji, ifume hood, indawo yokulinganisa, , i-particle counter, isampuli yomoya, ijenereyitha yomsi, i-aerosol generator, isilingi ethe nkqo i-laminar flow hood, ihood yokubamba umoya / ibhalomitha njalo njalo.
Iimveliso zethu zithengiswa ikakhulu kuMzantsi-mpuma weAsia, kuMbindi Mpuma, eMzantsi Melika, eAfrika, njalo njalo, kwaye sikhangela abasasazi bentsebenziswano bexesha elide kumazwe amaninzi ukukhuthaza iimveliso zethu., kwaye intengiso iyanda unyaka nonyaka.
Ngemibuzo malunga neeMveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso
Nceda uqhagamshelane nathi
Iyunithi B, iSakhiwo esinguNombolo-11, i-78 Xinglin Street, iSuzhou Industrial Park, kwiPhondo laseJiangsu, eChina.